Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း)
Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း) ကဘာလဲ။
Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း)ဆိုတာဘာလဲ။
Atelectasis ဟာ အဆုတ် (သို့) အဆုတ် ရဲ့ လုံးဝန်းတဲ့ အပိုင်းမှာ လုံးဝ (သို့) အနည်းငယ် ပျက်စီးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အဆုတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လေအိတ်ငယ်လေးတွေဟာ လေလျော့ကုန်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုအပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Atelectasis ဟာ အခြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ cystic fibrosis၊ ပြင်ပ အရာဝတ္ထုတွေကို ရှူမိခြင်း၊ အဆုတ်အကျိတ်များ၊ အဆုတ်အတွင်း အရည်စုပြုံခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အားနည်းခြင်း၊ ရင်ဘတ်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း) ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Atelectasis ဟာ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း) ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Atelectasis ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
Atelectasis ဟာ ဆေးရုံတက်နေရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူကျပ်လာရင် အရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ Atelectasis အပြင် အခြားအခြေအနေတွေက အသက်ရှူလမ်းကြေင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေပြီး တိကျတဲ့ ရောဂါသိရှိခြင်းနဲ့ စောစီးစွာ ကုသခြင်းတွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အသက်ရှူအလွန်ကျပ်လာရင် အရေးပေါ် ကုသမှု ယူသင့်ပါတယ်။
ဘာတွေက Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း) ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
Atelectasis ဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေ၊ အဆုတ် အပြင်မှ ဖိအားကြောင့် ဖြစ်စေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှု ခံယူသူတိုင်းဟာ ထုံဆေး၊ မေ့ဆေးတွေကြောင့် Atelectasis ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထုံဆေး၊ မေ့ဆေးတွေဟာ ပုံမှန်အသက်ရှူခြင်းကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး အငွေ့တွေစုပ်ယူမှုနဲ့ ဖိအားတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်ကာ အဆုတ်မှာရှိတဲ့ လေအိတ်ငယ်တွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ Atelectasis ဟာ နှလုံးခွဲစိတ်မှု လုပ်ထားသူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ပိတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ Atelectasis ဟာ အောက်ပါ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာ အကျိအချွဲ ပိတ်ခြင်းဟာ ခွဲစိတ်မှုလုပ်နေစဉ်နဲ့ လုပ်အပြီးမှာ အဖြစ်များပြီး Atelectasis ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်စဉ် အသုံးပြုရတဲ့ ဆေးတွေဟာ အဆုတ်ကို ပုံမှန်လောက် မဖေါင်းစေတာကြောင့် ပုံမှန် အကျိအချွဲတွေဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအတွင်းမှာ စုပြုံနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်စဉ် စုပ်ယူခြင်းဟာ ဒီအကျိအချွဲတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ cystic fibrosis ရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ် ဆိုးရွားချိန်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ပြင်ပ အရာဝတ္ထု –
Atelectasis ဟာ ပြင်ပအရာဝတ္ထုတွေ ဖြစ်တဲ့ မြေပဲ၊ အရုပ် လေးတွေကို အဆုတ်အတွင်း ရှူသွင်းလိုက်မိတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ရောဂါကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျဉ်းခြင်း –
နာတာရှည် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ မှိုရောဂါပိုး၊ တီဘီနဲ့ အခြားရောဂါတွေဟာ အမာရွတ်ထင်စေပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာ အကျိတ်ရှိခြင်း – ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အကျိတ်တွေဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပိတ်စေနိုင်ပါတယ်။
သွေးခဲခြင်း – ချောင်းဟပ်ထုတ်လို့ မရနိုင်တဲ့ အဆုတ်အတွင်း သွေးထွက်ခြင်းတွေ မှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပိတ်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်တဲ့ Atelectasis ရဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေကတော့
ချော်လဲခြင်း၊ ကားတိုက်မိခြင်းတွေဟာ အဆုတ်ကို ဖိမိတာကြောင့် အသက်ကောင်းကောင်းရှူနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။
အဆုတ် အမြှေးပါး ရောင်ခြင်း –
အဆုတ်ကို ကာရံထားတဲ့ အဆုတ် မြှေးထဲမှာ ရေစုပြုံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်အအေးမိခြင်း အတော်များများဟာ အဆုတ်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီး Atelectasis ကို ခဏတာ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
အဆုတ်နဲ့ ရင်ခေါင်းကြားထဲကနေရာကို လေဝင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အဆုတ် တစ်ခုလုံး (သို့) အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
အဆုတ် အမာရွတ်ထင်ခြင်း –
အမာရွတ်ထင်ခြင်းဟာ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အဆုတ် ရောဂါတွေနဲ့ ခွဲစိတ်ခြင်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှားပါးတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အမာရွတ်ထင်ခြင်းကြောင့် အဆုတ်တစ်ရှူးပျက်စီးမှုတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် Atelectasis ဟာ အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့အကျိတ်ဟာ အဆုတ်ကို ဖိမိနိုင်ပြီး လေဖြတ်သန်းခြင်းကို ပိတ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Atelectasis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက် – အသက် ၃ နှစ်အောက် (သို့) ၆၀ အထက်
ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သန်းခြင်း၊ သက်ပြင်းချခြင်းတွေကို နှောင့်ယှက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုခု
ရောင်ရမ်းမှု မဖြစ်နိုင်ခြင်း – အသက်ကြီးသူတွေမှာ secretions တွေ အဆုတ်ထဲဝင်ခြင်း
အဆုတ်ရောဂါ၊ ကလေးငယ်တွေမှာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ COPD, bronchiectasis နဲ့ cystic fibrosis
မကြာသေးမီက ဝမ်းဗိုက်၊ ရင်ခေါင်း ခွဲစိတ်ထားခြင်း
အသက်ရှူ ကြွက်သား ကျုံ့ခြင်းကြောင့် အားနည်းခြင်း၊ ကျောရိုးမ ထိခိုက်မိခြင်း၊ အခြား အာရုံကြော ကြွက်သားဆိုင်ရာ ရောဂါများ
အသက်ပြင်းပြင်း မရှူနိုင်ခြင်း – ဆေးတွေ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ နံရိုးကျိုးခြင်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း)ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
Atelectasis ကို သိရှိဖို့နဲ့ အခြေခံ အကြောင်းရင်းကို သိဖို့ အောက်ပါ စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Chest X-ray – Chest X-ray ဟာ Atelectasis ကို ပြသနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ ပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုလည်း Chest X-rays မှာ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
CT scan – CT ဟာ Atelectasis ကို သိရှိဖို့အတွက် Plain X-ray ထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ သူဟာ အဆုတ် တစ်ခုလုံး (သို့) အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ အဆုတ်တစ်ရှူးပမာဏကို တိုင်းတာနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပုံမှန် X-rays တွေမှာ မပြနိုင်တဲ့ အဆုတ်ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အကျိတ်တွေကိုလည်း ပြသနိုင်ပါတယ်။
Oximetry – ဒီရိုးရှင်းတဲ့ စစ်ဆေးမှုကတော့ လက်ချောင်းပေါ်မှာ သေးငယ်တဲ့ စက်တစ်ခုကို တပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓါရဲ့ အောက်စီဂျင် ပျော်ဝင်နှုန်းကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Bronchoscopy – ပျော့ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ ပြွန်တစ်ခုကို လည်ချောင်းထဲဝင်စေပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အတွင်း ပိတ်နေတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တဲ့ အကျိအချွဲ၊ အကျိတ်၊ ပြင်ပအရာဝတ္ထုတို့ကို ဆရာဝန်ကို တွေ့မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း)ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
Atelectasis ကုသမှုဟာ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Atelectasis ဟာ အဆုတ်ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာ ဖြစ်ရင် ကုသမှုမလိုပဲ ပြန်ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အကျိတ်ကြောင့် ဖြစ်ရင်တော့ ခွဲစိတ်မှု၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသမှု၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုတို့ကို အသုံးပြုပြီး အကျိတ်ကို ကျုံ့စေခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Chest physiotherapy – အဆုတ်တစ်ရှူး ပျက်စီးမှုကို ပြန်ကောင်းစေဖို့အတွက် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှူဖို့ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ခေါင်းပေါ် ခေါက်ခြင်း – ချွဲပျော်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ချွဲထုတ်စက်တွေ ဖြစ်တဲ့ air-pulse vibrator vest နဲ့ လက်နဲ့ ကိုင်ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသက်ပြင်းပြင်းရှူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ (incentive spirometry) လုပ်ခြင်းနဲ့ အသက်ပြင်းပြင်းရှူနိုင်ဖို့ စက်ကို အသုံးပြုခြင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓါမှာ ခေါင်းကို ရင်ဘတ်ထက်နိမ့်တဲ့ နေရာမှာ ထားခြင်းကလည်း postural drainage ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါဟာ အဆုတ်တွေ အောက်ခြေကနေ အကျိတ်အချွဲတွေ ကောင်းမွန်စွာ ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။
မောခြင်းကို သက်သာစေဖို့ အောက်စီဂျင်ပေးခြင်းလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်းနဲ့ အခြား စစ်ဆေးမှုများ – သင့်ဆရာဝန်က အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် ချွဲစုပ်ထုတ်ခြင်း၊ မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းဟာ ပျော့ပြောင်းတဲ့ ပြွန်တစ်ခုကို လည်ချောင်းမှတစ်ဆင့်ထည့်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ရှင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုအပြီး ချောင်းမဆိုးနိုင်သူတွေ၊ အောက်စီဂျင်နည်းသူတွေ မှာ continuous positive pressure ပေးခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Atelectasis (အဆုတ်ပျက်စီးခြင်း သို့ အဆုတ်လေအိတ်ပျက်စီးခြင်း)ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Atelectasis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာ ကလေးငယ်တွေမှာ Atelectasis ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်နှုန်းကို လျှော့ချဖို့ သေးငယ်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ကလေးငယ် လက်လှမ်းမီတဲ့နေရာတွေမှာ မထားသင့်ပါဘူး။
လူကြီးတွေမှာ ခွဲစိတ်မှုအပြီး Atelectasis ဟာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခွဲစိတ်ဖို့ စီစဉ်ထားတာရှိရင် Atelectasis ဖြစ်နှုန်းကို ဘယ်လိုလျှော့ချရမလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
Dr.Phyu Mon Latt
1. Atelectasis. https://medlineplus.gov/ency/article/000065.htm. Accessed 20 Dec, 2016
2. Atelectasis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atelectasis/basics/definition/con-20034847. Accessed 20 Dec, 2016